गोडाको हड्डी भाँच्चिएर धूलो भएकी नविना खनालको कथा ! भाइले लैजान्छन् स्कुल ! यती राम्रा छन् अक्षर (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > गोडाको हड्डी भाँच्चिएर धूलो भएकी नविना खनालको कथा ! भाइले लैजान्छन् स्कुल ! यती राम्रा छन् अक्षर (भिडियो)
गोडाको हड्डी भाँच्चिएर धूलो भएकी नविना खनालको कथा ! भाइले लैजान्छन् स्कुल ! यती राम्रा छन् अक्षर (भिडियो)
admin March 12, 2019 समाचार 0
तनहुँको दमौली नजिकै गुणादीमा हरेक दिन स्कुल जाने र आउने समयमा एक विद्यार्थी ह्विलचियर ठेल्दै गरेको देख्न सकिन्छ । पृथ्वी राजमार्गको सडकमा हजारौँ सवारी गुडिरहेका हुन्छन् समयको रफ्तासंगै सवारीसाधन हुईकिरहेका हुन्छन् । त्यहि सडकमा बिहान ९:३० बजे र साँझ ४:३० बजे आनन्दले नविनालाई ह्विलचियरमा राखेर हिडिरहेका हुन्छन् ।
जन्मजातै क्याल्सियमको कमी भएकाले नविना खनालको गोडाको हड्डी भाँच्चिएर धूलो भएको छ अनि हातहरु बाङ्गो भएका छन् । नविनाका भाई हुन् आनन्द हरेक दिन दिदीलाई स्कुल लैजाने र ल्याउने गर्दारहेछन्, आनन्दले । हामीले उनिहरुलाई । राजमार्गको छेउमा एउटा पसल अगाडी भेट्यौ । पसल गर्ने उनिहरुका मामा माइजु रहेछन् । उनिहरुकी आमाको स्वर्गबास भईसकेको र बुबाले छोडेर गएको मामा कृष्ण खनालले बताउनुभयो । नविना अहिले १५ वर्षकी भईन् । उनि कक्षा १ मा पढ्छीन् । भाई भने कक्षा ८ मा पढ्दा रहेछन् । हेर्नुह्स यी अपाङ्ग टुहुरी बालिकाको पिडा
भक्तपुरबाट बेहुलासहित जन्ती लिएर आएको जन्तीबस दुर्घटना,स्थिती तनाव ग्रस्त
नयाँ घर बनाएको ऋण तिर्न माधव कतार गए, नेपालमा न घर रह्यो न परिवार